Midowga Afrika: 13,000 oo muhaajiriin ah ayaa laga soo celiyay Libiya – Kasmo Newspaper
Midowga Afrika: 13,000 oo muhaajiriin ah ayaa laga soo celiyay Libiya
Updated - January 31, 2018 1:14 pm GMT
London (Kasmo), Xaaladda muhaajiriinta Libiya ayaa ahaa qodob muhiim ah oo lagu soo qaaday Shirweynihihii 30aad ee Midowga Afrika oo ka dhacay Addis Ababa, 28-29kii Jenaayo 2018.
Horraantii Disembar ilaa manta waxaa Libiya dib looga soo celiyay muhaajiriin gaaraysa 13,000, sida mas’uuliinta Afrikaanku Shirweynaha ka caddeeyeen. In kasta oo tiradu ka yartahay middii Ururku ku talagalay oo ahayd 20,000, ilaa bartamaha Jenaayo, Guddoomiye Moussa Faki Mahamat wuxuu ku adkaystay in daadgurayntu wali socoto.
Qulqulka qaxootiuga Libiya ee Badda Dhexe (Mediterranean Sea) waxaa 29kii iyo 30kii Nofembar 2017 looga hadlay kulan Midowga Yurub iyo Afrika ku dhexmaray Abidjan iyada oo fiiro gaar ah la siinayo addoonsiga qaxootiga.
Xaalada Libiya waxay sii xumaatay markii la riday Rejiimkii Mucammar Qaddafi, bishii Oktoobar 2011kii, ilaa maantana dalku ma helin kalaguur dimuqraadi ah, wuxuuna u kala qaybsanyahay 2 Xukuumadood: Xukuumadda Tripoli oo qalqaalada Maraykanka iyo Talyaaniga ku jirta iyo midda Tobruk oo Russiya iyo Masar ka dambeeyaan.
Kooxaha dadka tahriibiya waxay ka faa’deysteen muddo dheer xasilloonidarrada siyaasadda iyo dhaqaale, natiijaduna waxay noqotay qaxootiga oo dhibbanayaal u noqoday gaboodfallo joogto ah. Ururka Muhaajiriinta Adduunka (IOM) wuxuu caddeeyay in muhaajiriinta ku xabbisan xeryaha Libiya kor u dhaafayaan 400,000, walow qiyaasaha la gaarsiiyo ilaa 700,000.
Mas’uuliinta Libiya waxay dhowaan sheegeen in la xiray xarun qaxootiga lagu xiri jiray oo ku dhow Al-Khuma, bariga Tripoli, dadkii ku jirayna loo raray xarumo kale oo dalka ah.
Sida Wargayska ‘Libiya Observer’ qorayo, mas’uuliintu waxay maleeshiyadii xeradaas dadka ku haystay ku khasbeen in ay dhiibaan hubka iyo rasaasta.
Dhibaatada aadami ee aan ku koobnayn muhaajiriinta oo qur ah, lana wadaagaan qaybo badan oo muwaadiniinta ka mid ah darteed, Xafiiska Ergada Taageerada Qarammada Midoobay ee Libiya UNSMIL wuxuu codsaday $313 Malyuun oo Dollar.
Taas oo qayb ka noqonaya qorshaha 2018ka lagu caawinayo malaayiinta ku dhibaataysan gudaha Libiya, ee isugu jira muhajiriinta, barakacayaasha gudaha iyo magangalyo-doonka intaba.